सिन्दुरे जात्रालाई यो वर्ष देखी विशेषरूपले सम्पन्न गरिने , यस्तो छ इतिहास ! - ParyatanBazar.com
सिन्दुरे जात्रालाई यो वर्ष देखी विशेषरूपले सम्पन्न गरिने , यस्तो छ इतिहास !
फागुन ६, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने सास्कृतिक पर्वहरू लगभग सबै पर्वहरू नुवाकोट दरवार क्षेत्र भित्र देख्न सकिन्छ। यि पर्वहरू मध्ये सबभन्दा महत्वपुर्ण पर्व सिन्दुरेजात्रा पर्व हो।विगत आधा शताब्दि देखी भत्कन थालेको नुवाकोट दरवार क्षेत्र २०७२ को महाभुकम्पले खन्डहर नै बनेको छ। नुवाकोट दरवार क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वको सिन्दुरे जात्रालाई यो वर्ष देखी विशेषरूपले सम्पन्न गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ। नुवाकोट दरवार क्षेत्र तिन नम्वर प्रदेसमा उपत्यका जतिकै इतिहास बोकेको स्थलको रूपमा देशब्यापी प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने छ।
नुवाकोट दरवार क्षेत्र सांस्कृतिक रूपले पनि उपत्यका जतिकै धनि छ। नुवाकोटको सिन्दुरे जात्रा काठमाडौ उपत्यकामा मनाइने इन्द्रजात्रा, विस्केट जात्रा, मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा जतिकै महत्त्व र इतिहास बोकेको जात्रा हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने यी जात्राहरूमा इतिहासका राष्ट्र प्रमूख तथा सरकार प्रमुखको उपस्थित हुने जुन परम्परा सुरू गरिएको थियो आज पनि यो परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ। नुवाकोटको सिन्दुरे जात्रा पनि मल्लकालभरि राष्ट्रप्रमुखकै उपस्थितीमा मनाइने गरिएको इतिहासिक तथ्यहरू छन। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा राजा स्वंयको उपस्थितीमा सिन्दुरेजात्रा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन।
नुवाकोटको सिन्दुरेजात्रा मार्फत हामि नुवाकोटलाई तिन नम्वर प्रदेसकै सांस्कृतिक राजधानी धोषणा गर्ने अभियान संचालन गर्दै छौ। यो बर्षको सिन्दुरेजात्रा सुरू हुन आजवाट ठ्याक्कै दुई महिना बाकी छ। २०७६ वैशाख ५ गते नुवाकोट दरवार क्षेत्रमा सिन्दुरे जात्रा सुरू भइ वैशाख ९ गते सम्पन्न हुने महोत्सबका आयोजक समितिले जानकारी गराएको छ ।